बीएचएम पढेका मानिस बेरोजगार हुँदैनन्:-रचना थापा, निर्देशक - नेपालबहस
बीएचएम पढेका मानिस बेरोजगार हुँदैनन्:-रचना थापा, निर्देशक
जबसम्म घोकन्ते विद्यामा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म शिक्षामा परिवर्तन आउन सक्दैन
| १४:३१:५६ मा प्रकाशित
रचना थापा, नेपालको शैक्षिक, पर्यटन र अतिथि सत्कार उद्योगमा एउटा स्थापित व्यक्तित्व हुन् । सील्भर माउन्टेन स्कूल अफ होटल म्यानेजमेन्टको सह–संस्थापक तथा निर्देशक थापाले विद्यालय शिक्षा सेन्ट मेरिज स्कूल नेपाल र होटल व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार र अनलाइन सम्बन्धि उच्चशिक्षा भारत तथा अमेरिकाबाट हासिल गरेकी छन् ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो व्यवसायिक अनुभव र दक्षता प्राप्त थापा एस इन्टरनेशनल विजनेश स्कुल सिनामंगल र होटल स्कूल नेपाल, पोखरा र नेपालगञ्जको समेत सह–संस्थापक एवं निर्देशक पनि हुन् । उनले पाँचतारे होटल याक एण्ड यतीमा समेत सहायक व्यवस्थापक(फ्रन्ट अफिसर/सेल्स)को रुपमा काम गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी समाजसेवा र सामाजिक संस्थाहरु रोटरी क्लब, सेन्ट मेरिज अल्मुनाई संघ र अन्य केही व्यवसायिक संस्थामा आवद्ध थापासँग नेपालबहसका लागि सन्तोष खड्काले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश :
१. उच्च शिक्षामा कलेजहरुबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ ?
कुनै पनि व्यापारले नयाँ विचार वा सोच लिएर आयो भने त्यहाँ जहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विश्वकै विकासोन्मुख देशको परिस्थितिलाई हेर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राम्रो हुन्छ । आज भन्दा २० वर्ष अगाडी सील्भर माउन्टेन कलेज नेपालकै पहिलो निजी होटल म्यानेजमेन्ट कलेजको रुपमा खुलेको हो । आजको अवस्थामा अन्तर्राट्रिय स्तरको डिग्री दिने धेरै कलेजहरु खुलिसकेका छन् । तर, सील्भर माउन्टेन कलेज एउटा राम्रो उदाहरणका रुपमा स्थापित भएको छ ।
विद्यार्थीहरु सहजैरुपमा पढ्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिग्री नेपालमै दिन सफल भएकाले होला, यसलाई धेरै व्यक्तिहरुले पछाइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा जहिले पनि हुन्छ । त्यसलाई आफुले अपग्रेट गर्न सक्नुपर्छ । अरुले जे गर्यो आफुले पनि त्यहि गर्नुपर्छ भन्ने होइन । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नु नै राम्रो उपाय हो ।
२. प्लस टु सकिने बित्तिकै विदेश पढ्न जाने क्रेज छ, तपाईको धारण के हो ?
विश्वव्यापी बजारमा अवसरहरु धेरै छन् । कुनै समयमा बाहिर पढ्न जाने कुरा सपना हुन्थ्यो तर अहिले नेपालीहरुको माग विश्वमा बढ्दो छ । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई उच्चशिक्षाको लागि स्वीकार्ने दर पनि बढ्दो छ । तर भर्खर १७/१८ वर्ष उमेरका नानीबाबुहरु परिपक्क नभई र हातमा सीप पनि नभई बाहिर जान्छन् । विदेश जाँदा पनि धेरै पैसा खर्च हुने गर्छ । बाहिर जाँदा पढाइको आर्थिक बोझ घरपरिवारले धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसले गर्दा उनीहरुले राम्रो शिक्षा पाउँदैनन् ।
हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा बिताएको लामो समयको अनुभवले देखाउँछ कि अध्ययनका लागि विदेशका सबै संस्थाहरु राम्रो हुन्छ भन्ने हुदैन ।विकल्पहरु धेरै छन् । यदि नेपालमै विदेशमा जस्तै राम्रो पढाइ हुन्छ भने बाहिर जानु पर्दैन । आफ्नो घरमै नेपाली पैसा तिरेर हातमा सीप र शिक्षाको डिग्री हाँसिल गरेर विदेश जाँदा राम्रो हुन्छ । त्यसबेला व्यक्ति परिपक्क पनि बनिसकेको हुन्छ । उसले पार्टटाइम काम गरेर पढाइ पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँदा राम्रो मानिन्छ । म त्यसलाई नै बढी प्रथामिकता दिन्छु ।
३. प्लस टु पछि बीएचएम नै किन पढ्ने ?
नेपालको परिप्रेक्षमा हस्पीटालिटी र टुरीजम विषय डे वानदेखि नै नेपालको लागि एक अभिन्न अगंको रुपमा रहेको छ । हामी जन्मजात नै अतिथि सत्कार गर्ने स्वभावका हुन्छौं । नेपालका धेरै विकट ठाउँमा जाँदा पनि त्यहाँ होमस्टे र होटेलहरु खोलेर बसेका छन् । जसले होटल म्यानेजमेन्ट पढेका छैनन् । हामी नेपालीहरु उदार मनका हुन्छौं । अतिथी देव भवः भन्ने आदर्शले पनि देखाउँछ कि हामी पाहुनालाई भगवान मान्छौं । सत्कारमा कुनै कुराको कमी गर्दैनौं । मानिसहरुले यात्रा गर्न छोड्दैनन् । छुट्टीको लागि होस्, विजनेसको लागि होस् वा खोज अनुसन्धानको लागि मानिसहरु देशविदेशमा यात्रा गरिरहन्छन् । चाहे राष्ट्रिय स्तरमा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै किन नहोस् ।
यो कोरोना महामारीको बेला पनि प्रायः होटेलहरु बन्द भएनन् । हामी हेर्न सक्छौं, अहिले पनि नेपालीहरु नै देशभित्र नै कुनाकाप्चामा यात्रा गरिरहेका छन् । होटेल भनेको सुन्दर, पुर्वाधारमात्र होइन । करोडांै अर्बौ लगानी गरेर होटल खोल्यो भने पनि त्यसमा काम गर्नका लागि जनशक्ति त चाहिन्छ । त्यो जनशक्तिको लागि यो बीएचएम पढेको खण्डमा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप पाउनुको साथै देश विदेशमा विकाउने दक्षता र विज्ञता समेत हासिल गर्छन् ।
बीएचएम पढेकाहरुलाई उद्यमशीलतामा लाग्न पनि सजिलो हुन्छ । होटेलमात्र नभएर अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धि जति पनि क्षेत्रहरु छन्, त्यहाँ रोजगारी पाउन सक्छन् । पर्यटन, बैंक, हस्पिटल, एरलायन्स, क्रुज लगायत सबै क्षेत्रमा यो डिग्रीले सहयोग गर्छ ।
४. कोरोनाभाइरस पछि नेपालका निजी शैक्षिक संस्थाहरुप्रति राज्यको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?
शैक्षिक क्षेत्रमात्र नभएर अहिलेको समयमा सबै क्षेत्र अलमलमा परेको छ । गल्तीबाट सिक्दै बाँच्ने र संस्था टिकाउने कुरा ठुलो कुरा हो । राज्यले के गर्ला ? कस्तो स्थिति रह्यो भन्दा पनि आफैले संस्था बन्द गर्ने, सावधानी अपनाउने, अनलाईन माध्यममा जानेदेखि लिएर कोभीडपछि विस्तारै सुचारु कसरी गर्ने भन्नेमा हामी आफैले प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले स्कुल खोल वा बन्द गर भनेर नियम बनाउँछ । तर, त्यसको नतिजामा के होला भनेर ठोस निर्णय केही पनि आएको छैन् । त्यो भन्दैमा मानवको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न भएन । उनीहरुको सुरक्षासँग खेल्नु भएन । यसको लागि व्यक्तिगत रुपमा संस्थाहरुले आफ्नै मिहेनतले दुरदर्शी भएर काम गरेको देखिरहेको छु ।
त्यस्तै सील्भर माउन्टेनकै कुरा गर्दा पनि नेपाल सरकारले लकडाउनु गर्नु भन्दा एक हप्ता अगाडी नै हामीले स्कुल बन्द गरिसकेका थियौं ।किनभने धेरै संख्यामा विद्यार्थी आउलान, भोलि संक्रमण रैछ भने धेरै मात्रामा फैलन मद्दत गर्छ भनेर बन्द गरेका थियौं । हाम्रो सम्बन्धन कुइन्स मार्गरेट विश्वविद्यालय बेलायतको हो । जुन १ सय ५० वर्ष पुरानो धेरै मान्यता प्राप्त स्कुल भएकोले हामीलाई धेरै सहयोग गर्यो । लकडाउन भएकै दुई हप्तामा हामीले सबै कक्षाहरु अनलाइन सुरु गर्यौं । शिक्षकहरुलाई पनि तालिम दिने, विद्यार्थीहरु के कँहा छन् ? उनीहरुलाई पूर्व तयारी बनाउने सबै सील्भर माउन्टेनको टीमले नै गर्यौ ।
अब अहिले सोच्यो भने हाम्रो देशमा अनलाईनको राम्रो मान्यता र स्रोत साधन भइदिएको भए कक्षा १२ लगायत अन्य कक्षाको परीक्षा अन्योलमा हुदैन्थ्यो होला । परीक्षाको नतिजा पनि अहिलेसम्म आइसकेको छैन । आशा छ, छिट्टै आउने छ । यसमा धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ । हामीले परिणाम खोजेर मात्र हुँदैन ।
५. युवाहरु स्नातक र मास्टर्स डिग्री गरेपछि पनि बेरोजगार हुनेको संख्या बढिरहेको छ । यसको समाधान चाहि के होला ?
यो कुरा एउटा मान्छले हासिल गरेको शिक्षा कति गुणस्तरीय छ भन्ने पनि हो । हामीले पढेको डीग्री, एउटा कागजको महत्व कति दिनसम्म रहन्छ ? कोही मान्छेले कुनै पनि डिग्री हासिल गर्नु भनेको यदि तपार्इं बजारमा बिक्नु पर्यो भने डिग्री देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । अनुभव र इच्छा महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालमा सानै उमेरमा पार्टटाइम जागीर गराउने चलन छैन । कामलाई हामीले धेरै नै सानो ठुलो भनेर विभाजन गर्यौं ।
कसैले पनि डिग्री गर्दैछ, अनुभव छ, सानै कामबाट पनि सुरुवात गर्यौ भने त्यसको प्रमोशन छिट्टो हुन्छ । त्यो चाहिँ एउटा ¥याटीच्युड पनि हो । तर हामी नेपालीलाई विदेश गएपछि मात्र चाँडो सफल भइन्छ भन्ने सोच छ । विद्यार्थीको मात्र नभएर पारिवारिक सोचाई पनि यही छ । डिग्री गरेपछि परिवारहरु कुन देश पठाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर विदेश पठाउन दौडधुप गरिरहेका हुन्छौं तर नेपालमै पनि त सानो काम गरेरै सफल भएका धेरै मानिसहरु छन् । उनीहरुलाई हेरेर पनि हामी आफुले केही सिक्नु पर्ने हुन्छ र प्रचारप्रसार गर्न पनि उतिकै आवश्यक छ ।
पढेका कुराहरु शहरमुखी मात्र हुनु भएन । गाउँगाउँसम्म पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । जे कुराको महत्व पनि पैसासँग तुलना गर्नु हुँदैन । पैसा कमाउने व्यक्ति मात्र सफल हुन्छ भन्ने सोच बल्दनु पर्छ । बेरोजगारी छ, त्यसकारण भएका अवसरहरुलाई सदुपयोग गर्न जान्नु पर्छ । तर, अहिले नेपालमा धेरै बनिरहेका होटेल, अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा धेरै रोजगारीका मौकाहरु छन् । आफुले पाइन भनेर बस्नुको साटो पढ्दा नै अहिले म कहाँ कुन र कति मेहनतका साथ पढिरहेको छु । भोली यसले के गर्छ भनेर सोच्नु पर्छ ।
स्कुल र कलेजले दिएका शिक्षाबाहेक भाषाहरु, विभिन्न किसिमका तालिमहरु अनलाइनले दिरहेका छन् । ती लिन सकिन्छ । मौकाहरु धेरै छन् । सिक्ने कार्यहरु गरिहनु पर्छ ।
६. उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष गरि कलेजहरुमा मार्केटीङ काउन्सिलिङ गर्ने जनशक्तिको स्थिति कस्तो छ ?
खासगरि सील्भर माउन्टेनमा आबद्ध रहेका हरेक मानिसले यदि हामीलाई नै विश्वास गर्न सक्नुभएन भने अरु कसैलाई गएर बुझाउनु भनेको त्यो झुटो कुरा हो । बजार व्यवस्थापन काउन्सिलर भनेर त हुन्छ । तर, सील्भर माउन्टेनका काउन्सिलर, अध्यक्षदेखि लिएर सुरक्षा गार्डसमेत सबैले सील्भर माउन्टेनलाई प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ ।
यहाँको नैतिकता, कार्यक्रम र यहाँ केके सम्भावनाहरु छन् सबै उनीहरुले जानेका हुन्छन् । तर अरुलाई भन्दा पनि म के भन्छु भने सबैको आफ्नै योग्यता हुन्छ । त्यहि अनुसार काम दिनुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति नियुक्ति गर्ने मात्र होइन कि तालिम पनि दिनु पर्ने हुन्छ । तर, धेरै संस्थाहरुमा यसको कमि देखिरहेको छु ।
७. बीएचएम पढ्ने बिद्यार्थीहरुको इटर्नशिपका चुनौतिहरु केके छन् ?
सील्भर माउन्टेन अन्तर्राष्ट्रियस्तरसँग धेरै आवद्ध भएकाले आजको मितिसम्म देश र विदेशमा हाम्रा विद्यार्थीहरुले राम्रो इंटर्नशिप पाइरहेका छन् । त्यसमाथि हामीे कुनै पनि अनावश्यक शुल्क लिदैनौं । कलेजको फि मात्र हो । विदेशमा इन्टनसिप गर्न जानेले प्लेन चढेबाटै अनुभव लिन सुरु गर्छ । नेपालमा पनि यसले अनुभव त लिन्छ तर नेपालमा इन्टनशीप गर्न उल्टो पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि धेरै कुराहरु परिवर्तनहरु भइरहेको छ । हामीले इंटर्नशिपमा पठाउँदा के भन्र्छौ भने सित्तैमा पठाउन लगेको होइन ।
त्यस्तो ठाउँमा सील्भर माउन्टेनले विद्यार्थी पठाउँदैन । त्यो ६ महिना विद्यार्थी इन्टनसिप गरेर आउँछ भने उसको ६ महिना पूर्णरुपमा मुल्याकंन हुनु पर्छ । त्यहाँ पनि तालिम दिने डिपार्टमेन्टले लगातार तालिम लिइरहेको हुनुपर्छ । नेपालमा जति पनि होटेलसँग सहकार्य गरेर सील्भर माउन्टेनले काम गर्छ । लगातार तालिम भइरहेको हुनुपर्छ र भइरहेको पनि छ । अहिले सिनारीयो परिवर्तन भइरहेको छ । आज भन्दा ५ वर्ष अगाडी यहि प्रश्न गरेको भए अवस्था फरक थियो ।
८. बीएचएमका लागि सील्भर माउन्टेन नै किन ?
किनभने नेपालको सबैभन्दा पुरानो होटेल स्कुल हो । हामीसँग धेरै राम्रो पक्षहरु पनि छन् । बेलायतको १ सय ५० वर्ष पुरानो कुइन मार्गरेट विद्यालयले महिलाहरुका लागि विशेष कुकिङ स्कुल स्थापना गरेको हो । पछि गएर कालान्तरमा विश्वविद्यालय भएको हो । ४ वर्षको कार्यक्रमहरु धेरै प्रभावकारी र पूर्णरुपमा सफल भएको देखिन्छ ।
हाम्रा शिक्षकहरु होटेल म्यानेजमेन्ट पढेको मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र तालिम प्राप्त छन् । राम्रो विद्यार्थीलाई धेरै राम्रो बनाउन सक्नु ठुलो कुरा होइन, कमजोर विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउँन सक्नु नै सफल मानिन्छ । विद्यार्थीको व्यक्तिगत विकास र दक्ष शिक्षा दिनु पनि हाम्रो उद्देश्य हो । अर्को कुरा उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र सुरक्षित भविष्य देखाउनु हाम्रो बलियो आधार हो ।
सील्भर माउन्टेनमा पढ्न आइसकेपछि विद्यार्थीहरुले राम्रो होटेलबाट अनुभव लिन पाउछन् । उनीहरुको भविष्य सुरक्षित होस् भन्नको लागि हामीहरुले स्नातक सकिएपछि विश्वव्यापीरुपमा अनुभव लिने आधारको व्यवस्था गरेको छौं । जसले गर्दा सील्भर माउन्टेनलाई सबैले रुचाइरहेका छन् ।
९. हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु केके हुन ? समस्या उच्च शिक्षामा हो कि ? विद्यालय शिक्षामा ?
सुधार भनेको सुरुवाती चरणबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि धेरै जसो विद्यार्थी घोकन्ते शिक्षामा मात्र सीमित भएका छन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छौं ।
तर, सील्भर माउन्टेनमा अनुसन्धानात्मक शिक्षालाई बढि प्राथामिकतामा राखिन्छ । कसैले भनेको कुरालाई पढ्नु मात्र नभई अनुभवको आधारमा शिक्षा दिइने गरेका छौं । जसले गर्दा विद्यार्थीको दक्षता बढ्नु नै यस कलेजको विशेष आकर्षण हो । जबसम्म घोकन्ते विद्यामा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म शिक्षामा परिवर्तन आउँन सक्दैन ।
कुनै विद्यार्थीहरु प्रयोगात्मक रुपमा मात्र अब्बल हुन सक्छन् । मैले भन्न खोजेको के हो भने शिक्षा प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ जहाँ विद्यार्थीहरुको दक्षतालाई ध्यानमा राखी उनीहरुलाई अनुभवको आधारमा पनि अगाडी बढ्न हौसला दिइन्छ । जसरी कुनै पनि सरकारी अनुमतिपत्रहरु हरेक पाँच वर्षमा पुनः जाँच गरिन्छ, त्यसैगरि शिक्षकहरु पनि समयअनुकुल परिवर्तन हुनसक्नु भएको छ वा छैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।
जस्तो कि सन् १९६० मा अब्बल मानिएको शिक्षक सन् २०२१ सालमा पनि अब्बल छ भन्न सकिदैन । किन कि समय परिवर्तन छ । पुस्ताहरु पनि परिवर्तन र विकसित भइरहेको छ । त्यसैगरि शिक्षकहरुमा पनि केहि परिवर्तन आउनु पर्यो भन्ने मेरो धारणा हो । काठमाडौंमा मात्र नभएर यो गाउँगाउँमा पनि लागु हुनुपर्यो ।
१०. प्लस टु पछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीले कलेजको पहिचान कसरी गर्ने ?
मुख्य कुरा त भौतिक पूर्वाधार नै हो । शिक्षक आएर किताबको ज्ञानहरु त धेरै नै दिए तर व्यवहाकितामा लागू हुने ज्ञान र अनुभव दिनसकेनन् भने त्यो शिक्षा त्यति फलदायक हँुदैन । जस्तो कि बीएचएमलाई हेर्दा ल्यावमा विद्यार्थीको कस्तो दक्षता छ ? किनभने उसले सिकेको कुराहरु त अबको ४ वर्षपछि बजारमा लैजाने हो । अहिले सिकेको शिक्षा हाललाई नभई भविष्यका अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका लागि तयार हुनुपर्छ ।
विद्यार्थीले पनि यो बुझ्न जरुरी छ कि आज पढेको शिक्षा आजको लागि नभई भविष्यको लागि हो । हस्पिट्यालीटी क्षेत्रलाई हेर्दा मानिसहरु घुम्न, खान, अनुभव गर्न छोड्दैन । यो भनेको धेरै नै सुरक्षित क्षेत्र हो । यसको संरचना परिवर्तन होला तर होटेल त सदैव रहिरहन्छ । त्यसैले विद्यार्थीले हासिल गरेको शिक्षा र अनुभव परिवर्तन भएको शिक्षासँग कत्तिको मेल खान जान्छ र उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ ।
११. कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी बुझ्नु हुन्छ ?
हरेक नागरिकलाई देशको राजनीतिक अवस्था के भइरहेको छ, यो बुझ्न आवश्यक छ । पछि गएर यो भएन, त्यो भएन भन्नु भन्दा विश्वभर लगायत देशमा के भइरहेको छ जानकार हुनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ तर फोहोरी राजनीति गर्नु भएन । हाम्रो कलेजमा भएका व्यक्तिहरुले एक अर्कालाई के गर्यो भनि सोध्नु भन्दा आफुले के गर्याै/गरेँ भनेर सम्झिनु पर्छ ।
जसरी एउटा सभ्य नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो कि गरेन भनेर सोच्न पनि जरुरी छ । सील्भर माउन्टेनको नारा पनि यहि छ कि जिम्मेवारीसहितको स्वतन्त्रता । स्वतन्त्र भए भन्दैमा आफुसँग भएको कुनै पनि पदको गलत प्रयोग गर्नु भएन ।
आजको मितिसम्म हाम्रो कलेजमा कुनै पनि पार्टीको झन्डा राख्न दिएका छैनौं । सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली हो । हामीले के गर्नु पर्छ, यसको कर्तव्य हुनुपर्छ । सबैका लागि राम्रो सोच्ने र सिकाउने हुनुपर्छ ।
१२.सील्भर माउन्टेनले ल्याएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम के के हो ?
सील्भर माउन्टेनले सुरुवाती चरणमा व्याचलर इन हस्पिट्यालीटी एण्ड टुरीज्म म्यानेजमेन्टबाट पढाउन सुरु गरेको हो । त्यसपछि नेपालमै पहिलो पटक सील्भर माउन्टेनले व्याचलर इन इन्टरनेशनल कुलीनरी आर्ट यो वर्षबाट सुरु गर्दैछौं । हामीले के महशुश गर्यौं भने विद्यार्थीहरु भर्ना हुन आउँदा बिएचएमपछि के बन्छौ ? भनेर सोध्दा सेफ भन्छन् । त्यो किसिमको गुणस्तरीय पढाइ नेपालमा थिएन, जो धेरै जरुरी छ ।
विदेशका हरेक होटेलमा हेर्दा नेपाली सेफ देख्छौं तर उनीहरु त्यतै नै गएर विकसित र दक्ष भएका हुन । उनीहरुसँग क्षमता छ तर माथिल्लो स्तरमा पुग्नका लागि आवश्यक शिक्षा नेपालमा छैन् । त्यसकारण हामीले व्याचलर इन इन्टरनेशल कुलीनरी आर्ट सुरु गरिएको हो । जसले सेफहरुलाई एउटा दक्षता दिनुका साथै उच्चस्तरमा जानका लागि सफल शिक्षा प्रदान गर्दछ । जुन हामीले ल्याएको कार्यक्रम बेलायत, इन्डिया, सिंगापुर लगायत धेरै देशहरुमा यो प्रख्यात छ ।
घुम्न मन पर्ने ठाउँ ?
चितवन, आमस्टडम र स्तानबुल ।
तपाईको रोलमोडल ?
हजुरआमा । उहाँ मेरो जीवनको लागि विशेष हुनुहुन्छ । मेरो जीवनमा भएका धेरै आरोह अवरोहमा उहाँको साथ र सहयोग छ । उहाँ एकदमै साहासी व्यक्ती हो, आफुले उच्च शिक्षा नलिएता पनि मलाई धेरै शिक्षा दिनुभयो । जसले गर्दा आज म यहाँ छु ।
मन पर्ने कितब ?
झुम्पा लहरी, फात्सुङ–चुदेन काविभो/ सािपस्कस यूभल नोहा हरारी, Cast-Isabel Wilkerson
मन पर्ने चलचित्र ?
Queen Gambit (Series), दिल धडकने दो, पशुपती प्रसाद
मन पर्ने खाना ?
नेपाली र जापानी खाना
नवाजुद्धिन सिद्धिकी, मनोज त्रिपाठी, राधिका आप्ते, Benedict Cumberbatch
मन पर्ने पहिरन ?
आफुलाई सहज लाग्ने, सुहाउने र आत्मविश्वास जगाउने जुनसुकै ड्रेस ।
मन पर्ने नेता ?
न्यूजिल्याण्डको वर्तमान प्रधानमन्त्री Jacinda Ardern
छतबाट लडेर डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीको मृत्यु ६ दिन पहिले
टटेलटारमा स्टाफ कलेज निर्माण प्रक्रिया शुरु १ हप्ता पहिले
सरकारले खरिद गरेको मल बुधबार कोलकात्ताबाट नेपालतर्फ हिडाइँने ८ घण्टा पहिले
मोरङमा तेस्रो चरणमा थप एक लाखलाई खोप लगाइने १० घण्टा पहिले
अनुसन्धानका लागि भनी पक्राउ गरिएकालाई थुनामुक्त गर्न आदेश १० घण्टा पहिले
दुईवटा ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु १८ घण्टा पहिले
सरकारले थाल्याे थप ५० लाख डोज खोप खरिदको प्रक्रिया ११ घण्टा पहिले
२ वर्षमा ४७ अर्बको राजश्व छली, एक हजारविरुद्ध मुद्दा १६ घण्टा पहिले
जिल्लास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट शुरु १३ घण्टा पहिले
अकालमै मृत्युको कारण बन्दै विलासी जीवन १५ घण्टा पहिले
सेवा प्रदानमा सहजता ल्याउन स्वयंमसेविकालाई साइकल वितरण १७ घण्टा पहिले
प्रवीण बाँस्तोला हत्या प्रकरणमा थप एक प्रतिवादी पक्राउ १६ घण्टा पहिले
सुजनको ‘लजाएर’ गीत सार्वजनिक ३ दिन पहिले
निगमको थानकोट डिपोमा अब रहेन सुरक्षा चुनौती ५ दिन पहिले
नेप्सेमा मञ्जुश्री फाइनान्सको बोनस शेयर सूचीकृत २ दिन पहिले
‘कांग्रेस कम्युनिष्टको असफलताले बिदेशी चलखेल निम्त्यायो’ कमल थापा ३ दिन पहिले
राज्यले सहजीकरण गरेमा निजी क्षेत्रमार्फत द्रूत आर्थिक विकास सम्भव छ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल ३ दिन पहिले
सत्तारुढ दलको सत्ताको झगडाले देश संकटग्रस्त : राप्रपा १३ घण्टा पहिले
तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन वामदेवकाे माग ७ दिन पहिले
मकवानपुरमा मदन भण्डारी स्मृति खेलकूद मैदान बन्दै ३ हप्ता पहिले
ओली समूहमा नेताको खडेरी, पोखरेल र नेम्वाङ सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने ३ हप्ता पहिले
उत्तरगङ्गा जलविधुत आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा ४ हप्ता पहिले
कालीप्रसाद बाँस्कोटाको ‘मैना’मा गरिमा शर्मा (भिडियो) ५ दिन पहिले
झोलुङ्गे पुलमा ताला लगाइएपछि तरकारी बिक्री गर्न किसानलाई समस्या १० महिना पहिले
अबिबाहित र बिबाहित महिलाका लागी एकै मञ्चमा दुई सौन्दर्य प्रतियोगिता १ हप्ता पहिले
सरकारको साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान प्रभावित हुने १० महिना पहिले
संक्रमणबाट मृत्यु भएको भन्दै झुटो प्रचार गर्ने एक जना पक्राउ ११ महिना पहिले